फोटो फ्रेममा कला देखाउँदै – Rajdhani Daily
फोटो फ्रेममा कला देखाउँदै
सिन्धुपाल्चोकमा जन्मेका च्याङ्बा लामाले बाल्यकाल गाउँमै बिताए । तन्नेरी भएपछि इलम खोज्ने क्रममा सवारी चालकसँग भेट भयो । साथीभाइले भने,‘आइज, गाडी हाँक । यही छ मस्ती ।’गाडी चलाउन सुरु गरे । तर, उनको मस्ती गर्ने तरिका अरूको भन्दा फरक थियो । उनी गाडी हाँक्दै जहाँ पुगिन्छ, प्रकृतिमा भुलिहाल्थे । वरिपरिको हरियो पाखा पखेर हेर्दै कल्पिन्थे, ‘आहा † फोटोग्राफर हुन पाएको भए पृथ्वीमा बसेर जुन टिप्थें ।’
गाडी चलाउँदै थिए । उनको गाउँकै एकजना दाइ थिए । जसको काठमाडौंमा कलर ल्याब थियो । अनायासै भेटघाटको क्रममा भने, ‘च्याङ्बा गाडी चलाएर हुन्न । आऊ, मेरो ल्याबमा काम गर ।’ फोटो प्रिन्ट गर्ने ल्याब मात्रै होइन । फोटो खिच्ने स्टुडियो पनि थियो ।
च्याङ्बालाई लाग्यो, ‘मैले जे सोचेको थिएँ, पूरा हुँदै छ ।’ गरिरहेको काम चटक्कै छाडेर ल्याबमा काम सुरु गरे । ल्याब छिरेका च्याङ्बा केही महिनामै ल्याब टेक्निसियन र फोटोग्राफर बने । ल्याबको कामले मात्रै चित्त बुझेन उनलाई । अनि ग्ल्यामर्स फोटोग्राफर राजीव श्रेष्ठको संगतमा पुगे । पाँच वर्ष राजीवसँगै हिँडे । उनले दर्जनांै मोडल र विज्ञापनको फोटो खिचे ।
कुनै बेला गाडीको स्टेरिº समाउ“दै पाखा पखेराको फोटो खिच्न पाए भनेर मख्ख पर्ने च्याº्बा लामा अहिले कुशल फोटोग्राफरका रुपमा चिनिन्छन् । उनले बनाएको फोटोफ्रेम उत्तिकै लोकप्रिय छ
राजीवसँग काम गर्ने क्रममै उनले फ्रेमिङबारे थप ज्ञान हासिल गरे । झन् सजिलो भयो । उनले सोचे, ‘सधंै अरूको पछि लागेर हुन्न, अब आफैं केही गर्नुपर्छ । आफन्तसँग रिनपान गरेर आफ्नै लगानीमा स्टुडियो खोले । तर, सोचे जस्तो भएन । उनको स्टुडियो डुब्यो । केटाकेटी हुर्कंदै थिए । गाउँ फर्किने अवस्था पनि थिएन । तैपनि, पानोरमा स्टुडियोमा काम सुरु गरे ।
त्यसपछि उनले केबल काम मात्रै गरेनन् । फोटोग्राफी र फोटो फ्रेमबारे थप अध्ययन पनि गरे । उनलाई लाग्यो, ‘अब फोटो प्रिन्ट गरेर मात्रै हुन्न । आकर्षक शैलीमा फ्रेमिङ गर्नुपर्छ ।’ विभिन्न काठ प्रयोग गरेर च्याङ्बाले ठूल्ठुला आकारमा फ्रेमिङको काम सुरु गरे । उनी भन्छन्, ‘नेपालमा फोटो फ्रेमिङको सुरुवात गर्ने म नै हुँ ।’
उनले अहिले पनि सोही कामलाई निरन्तरता दिएका छन् । उनी भन्छन्, ‘म सस्तो र राम्रो फ्रेमिङ बनाउँछु ।’ उनी अहिले विभिन्न शैलीका काठलाई आकर्षक बुट्टा भर्छन् । फ्रेमिङ गर्छन् । एक दर्जनलाई जागिर दिएका च्याङ्बा भन्छन्, ‘हामी दिनमा पाँच सयभन्दा बढी फ्रेम उत्पादन गर्छौं ।’ राजनीतिक दलका नेतादेखि विभिन्न कलाकारको फोटो फ्रेमिङ गरेका च्याङ्बालाई सम्झना छ । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको बेला उनको फोटो फ्रेमिङ गरेका थिए ।
डा. भट्टराईको फोटो फ्रेमिङको सेतुको काम गरेका थिए फोटो पत्रकार नरेश श्रेष्ठले । उनले खिचेको फोटो फ्रेमिङ गरेर पठाएपछि डा. भट्टराईले पारिवारिक तथा सामूहिक तस्बिरको निम्तो गरे ।
‘पछि त मैले डा. भट्टराईको सामूहिक तस्बिर नै खिचें,’ लगभग सबै दलका शीर्ष नेताको फोटो खिचेका च्याङ्बा भन्छन्, ‘अब यसैमा थप कला भर्न प्रयासरत छु ।’ ल
Tags: फोटो फ्रेममा कला देखाउँदै